Guddoonka Baarlamaanka oo ka hadlay halkii uu ku dambeeyay Mooshinkii Madaxweynaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoonka Baarlamaanka oo ka hadlay halkii uu ku dambeeyay Mooshinkii Madaxweynaha
Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyay mooshinkii ka dhanka ahaa Madaxweynaha, kaasoo 12-kii bishan ay Guddoonka Baarlamaanka u gudbiyeen in ka badan 93 Xildhibaan.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in mooshinkaas uu yaallo xafiiska Guddoonka Baarlamaanka, isla markaana aan wali la horkeenin Baarlamaanka, waxaana uu xusay in mooshinka laga keenay Madaxweynaha uu ka duwan yahay mooshinadii horay looga keenay Xukuumadda.
“Arrinta Mooshinka ee ka soo horjeeda Madaxweynaha, soo jeedintaas Xildhibaana keensaday Xafiiska Guddoonka ayuuna yaalla, marka dadka inay kala fahmaan la rabaa Baarlamaanka lama hor keenin, ajandahana kama mid ahan”ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka oo hadalkan ka sheegay barnaamij dood ahaa oo ka baxay shalay oo jimco aheyd Radio Muqdisho.
Sidoo kale waxaa uu xusay in eedeymaha Madaxweynaha loogu soo jeediyay mooshinka ayuu tilmaamay in loo baahan yahay in dariiq kale ay soo marto, isla markaana Maxkamad ay xaqiijiso, lana soo cadeeyo sida uu yiri.
“Mooshinkii laga keeni jiray Xukuumad kalsooni lagala noqonayo oo kale ma ahan mooshinkan, waana ka duwan yahay, waxay u baahan tahay in la soo maro dariiq kale, in Maxkamad ay soo xaqiijiso iyo cadeyn inay u baahan tahay, ma ahan tii caadiga aheyd ee Xildhibaanada ay keeni jireen oo durba uu Baarlamaanka guda geli jiray, taas waa ka bedelan tahay”ayuu yiri Mahad Cabdalla Cawad.
Xildhibaanada mooshinka ka keenay Madaxweynaha ayaa qorsheynaya in mooshinka loo gudbiyo Maxkamadda Sare, maadaama aanay jirin Maxkamadii Dastuuriga aheyd ee go’aan ka gaari laheyd eedeymaha culus ee Madaxweynaha loo jeediyay.
Hase ahaatee Guddoonka Baarlamaanka ayaa wada kulamo wada tashiyo oo u badan kuwo xal looga gaarayo mooshinkan, waxaana sidoo kale Madaxtooyada ka socda olole xoogan oo lagu kala dhantaalayo mooshinkan, iyadoo aanay ka marneyn xod-xodashada xaga xildhibaanada.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii 12-kii bishan loo gudbiyay Guddoonka Baarlamaanka mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha ayaa waxaa soo baxayay walaac laga muujinayay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo inay dib u dhac ku keento hiigsiga sanadka 2016.
Ciidamada DF iyo AMISOM oo la wareegay deegaanno hoostaga Buurhakaba